Global Fund Yobatsira Zimbabwe neMari Kuitira Kuti Irwise Coranavirus
Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kuitira kuti igobatisra mukurwisa hutachiwana hweCoronavirus kana kuti Covid-19.
Mukuru wesangano reGlobal Fund, VaPeter Sands, vazivisa nezverubatsiro uhwu pamusangano wavaita nevatapi venhau vari pamwe chete negurukota rezvehutano, VaObadiah Moyo.
Vachipindura mubvunzo wekuti mari yavavimbisa kupa nyika mukurwisa Covid-19 ichauya riinhi, VaSands vati vakarerutsa zvinodiwa pakuti nyika inoda rubatsiro kubva kwavari iwane mari nekuda kwekuona kuti covid-19 iri kutekeshera pasi rose.
Vati vanotarisira kuti mari iyi inogona kuburitswa mukati memazuva mashanu.
Asi vati kupa rubatsiro urwu hakurevi kuti sangano reGlobal Fund rave kuzobvisa maziso aro pachinangwa charo chikuru chekurwisa zvirwere zveHIV/Aids, malaria nerurindi.
VaSands vazivisawo kuti pamwaka mutsva wechirongwa cherubatsiro rwavanopa kunyika dzakasiyana siyana kurwisa zvirwerere zveHIV/ Aids, Malaria neTuberculosis, Zimbabwe iri kuzowana mamiriyoni mazana mashanu emadhora yekuAmerica vakatiwo vari kufara nebasa riri kuitwa neZimbabwe mukurwisa zvirwere zvitatu izvi.
Pamwaka wakapfuura wechirongwa ichi, Zimbabwe yaive yapiwa mazana mana nemakumi manomwe nemanomwe emamiriyoni emadhora yekurwisa zvirwere izvi.
VaMoyo vati hurumende inofara zvikuru nerubatsiro rwairi kupiwa neGlobal Fund vachiti kuwedzera kwayaita mari yekurwisa zvirwere zveHIV/Aids malaria nerurindi kunoratidza kuti hurumende iri kushandisa mari inobva kuchirongwa ichi nemazvo.
Panyaya yekuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana pakurwisa hutachiwana hweCovid-19 kana hukatekeshera munyika uye kuti hurumende haizi kutaura chokwadi pamusoro pekuti pane vanhu vabatwa nehutachiwana uhu here kana kuti kwete, munyori webazi rezvehutano, Dr Agnes Mahomwa, vaudza Studio7 kuti vanhu vanofanirwa kuvimba nezviri kutaurwa nehurumende.
Dr Mahomva vakurudzira veruzhinji kuti vaite tsika yekuchengetedza hutano senzira yekudzivirira kuti hutachiwana uhu huve munyika.
MuZimbabwe hamusati mave nemunhu ati abatwa nehutachiwana hweCovid-19 kusvika pari zvino kubvira pahwakatanga kuzivikanwa nezvaho kuChina pakupera kwegore rapera.
South Africa yave nevanhu gumi nevatatu vakabatwa nehutachiwana uhu uye.
Hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona pakutarisa vose vanopinda munyika panhandare dzendege pamwe nepamiganhu yenyika uye kuzivisawo veruzhinji nezvehutachiwana uhu nenzira dzakasiyana siyana.
Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvina vafa nechirwere cheCoronavirus.